उखुको समर्थन मूल्यमा किचलो, उद्योगी र किसानको आ-आफ्नो अडान ।। | संस्कार एफ.एम. ९५.६ मेघाहर्ज
Home मुख्य समाचार उखुको समर्थन मूल्यमा किचलो, उद्योगी र किसानको आ-आफ्नो अडान ।।
Posted By: sanskar fmon: २१ मङि्सर, २०७६ In: मुख्य समाचार
२१ मंसिर, सं. ख. कलैया, बारा
किसान र व्यवसायीको आ-आफ्ना अडानपछि उखुको समर्थन मूल्य सिफारिस प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । उखु किसानहरुले मूल्य नबढाए उखु खेति नै छोड्ने चेतावनी कषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री धनश्याम भुसाललाई दिएका छन् भने उद्योगीहरु मूल्य बढाउन नसकिने अडानमा छन् ।
सिंहदरबारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा आफूहरुले मल, बीउ, श्रमिक लागत जस्ता कुराले उखु खेतिको लागत बढेको गुनासो कृषि मन्त्रीसमक्ष गरेको उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । यता उद्योगीहरुले भने गत वर्षकै समर्थन मूल्य अधिक भएको भन्दै अब मिल बन्द गर्न पर्ने अवस्था आउने चेतावनी मन्त्रालयलाई दिएका छन् ।
कृषि मन्त्री भुसालले किसानलाई गत वर्षकै मूल्यलाई न्यूनतम मानेर समर्थन मूल्य सिफारिस गर्ने आश्वासन दिएको मैनाली बताउँछन् । गत वर्ष तोकिएको मूल्य पनि उद्योगीले नदिएको तथा अनुदान पनि नपाएको भन्दै आफूहरु सो मूल्यमा राजी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले गत वर्षभन्दा मूल्य बढाउँदैन भने हामी उखु खेति छोड्छौँ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने ।
यता उखुको मूल्य अधिक भएकाले समर्थन मूल्य नबढाउन चिनी उत्पादकहरुले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको उद्योगी राजकुमार अग्रवालले बताए । चोर बाटोबाट नेपाल भित्रिने भारतीय सस्तो चिनी, सरकारले हरेक वर्ष गर्ने आयात र महँगो उत्पादन लागतका कारण चिनी उद्योगहरु धरासायी भएको उनको भनाइ छ ।
एक किलो चिनी उत्पादन गर्न लाग्ने कुल खर्चको ८३ प्रतिशत लागतमै खर्च हुने भन्दै उनले समर्थन मूल्य बढाए उद्योग बन्द गर्नपर्ने अवस्था आउने दाबी गरे । गत वर्षकै चिनी नबिकेर थन्किएको भन्दै उनले उखुको मूल्य बढाउनु भनेको उपभोक्ता र उद्योगी मार्ने खेल हुने बताए । समर्थन मूल्य सिफारिस गर्नेबारे कृषिमन्त्री भुसालले उद्योगीहरुसँग थप एक साताको समय गृहकार्यका लागि मागेको उनले जानकारी दिए ।
मूल्य सिफारिस समितिको बैठकमा उखुको समर्थन मूल्यबारे छलफल भए पनि निर्णय भई नसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । सिफारिस समितिले प्रतिक्विन्टल मूल्य गत वर्षकै रहने तर किसानलाई दिने अनुदान भने भने बढाउन सक्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताए । ‘तर यो नै अन्तिम निर्णय भने होइन,’ उनले भने ।
उखुको अन्तिम समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कार्यान्वयनमा आउँछ । उखुको समर्थन मूल्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिफारिस गर्छ । कृषिको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन्छ  । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ, २०७३/७४ मा प्रतिक्विन्टल रुपैयाँ, २०७२/७३ मा ४६१ रुपैयाँ तोकेको थियो ।